ज्यानको माया नभए गर्मीको मज्जा लिए हुन्छ... समर्सबी अब लेदो र किराको स्वादमा उपलब्ध ! (भिडियोसहित)
ARCHIVE, FEATURED, MUDRA MAMILA » ज्यानको माया नभए गर्मीको मज्जा लिए हुन्छ... समर्सबी अब लेदो र किराको स्वादमा उपलब्ध ! (भिडियोसहित)
काठमाडौँ- गर्मी छ । आजकल खुब गर्मी छ । यस्तो गर्मीको समयमा समर्सबी पिउने इक्षा गर्नु भएको छ ? यदी छ भने आफ्नो ज्यानको माया पारेर समर्सबी पिए हुन्छ । तर ज्यानको अलिकति पनि माया छ भनेचाहिं यो पेय पदार्थ खानु निकै रिस्की काम छ । किन कि गोर्खा ब्रुअरीले नेपाली बजारमा ल्याएको समर्सबी पेय पदार्थमा अखाद्य बस्तु भेटिएका छन् ।
अर्थ सरोकार डटकमले फेला पारेको समर्सबीको भिडियोमा समर्सबीका बोटलहरुमा किरा र लेदो भेटिन थालेका छन् । २०७३ जेठबाट खेतान खेतान ग्रुपले गोर्खा ब्रुअरीमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘सफ्ट ड्रिंक्स’ को रुपमा समर्सबी बजारमा ल्याइएको हो ।
Tags : ARCHIVE, FEATURED, MUDRA MAMILA